GBA4iOS, जेलब्रेकको आवश्यकता बिना तपाइँको खेल केटा इमुलेटर | आईफोन समाचार
GBA4iOS, जेलब्रेकको आवश्यकता बिना तपाइँको खेल केटा इमुलेटर
लुइस प्याडिला | | iOS 7, आईफोन खेलहरू
इमुलेटरहरू अनुप्रयोगहरू हुन् जुन तपाईंको आईओएस उपकरणमा खेल कन्सोलहरू नक्कल गर्दछ। मारियो ब्रोस, जेल्डा वा मारियो कार्ट जस्ता गेम ब्वा भिडियो गेमहरू खेल्न सक्षम हुनु भनेको केहि आईओएस प्रयोगकर्ताहरूको ठूलो रुचि जगाउने कुरा हो जुन यस प्रकारको अनुप्रयोगले अनुप्रयोगमा लुक्ने तथ्यबाट प्रमाणित हुन्छ। एप्पलले यसलाई स्टोरबाट हटाउनुभन्दा पहिले यो डाउनलोड डाउनलोड हुन्छ। GBA4iOS यी एमुलेटरहरू मध्ये एक हो, तर यसको लाभको साथ कि यो एप स्टोरमा छैन, त्यसैले एप्पलले यसलाई हटाउन सक्दैन, न त यसलाई जेलभ्रेक स्थापना गर्न आवश्यक छ, त्यसैले यो उत्तम इमुलेटर हो। थप रूपमा, यो भर्खरै संस्करण २.० मा अद्यावधिक गरिएको छ, आईओएस,, आईफोन र आईप्याड र MFi नियंत्रकहरूको साथ उपयुक्त। तपाइँ यसलाई कसरी स्थापना गर्ने जान्न चाहानुहुन्छ? हामी यसलाई तल तपाईलाई व्याख्या गर्दछौं।
स्थापना तपाईंको उपकरणबाट सिधा गरियो। तपाईको इन्टर्नेट ब्राउजरमा खोल्नुहोस् यो ठेगाना, र बटन क्लिक गर्नुहोस् GB डाउनलोड GBA4iOS 2.0 »। एउटा विन्डो खुल्नेछ जसमा तपाइँ स्थापना क्लिक गर्नुहोस्, र तपाइँको स्प्रिंगबोर्डमा एक नयाँ आइकन देखा पर्नेछ। जब तपाईं पहिलो पटक इमुलेटर चलाउनुहुन्छ, तपाईंले विन्डोमा देखा पर्छ "जारी राख्नुहोस्" मा क्लिक गर्नुपर्दछ, तर यो फेरि देखा पर्ने छैन।
अनुप्रयोगले कुनै ROM समावेश गर्दैन, तर तपाईं तिनीहरूलाई एकीकृत ब्राउजर प्रयोग गरेर माथिल्लो दाहिने कुनामा "+" बटन क्लिक गरेर प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। ROM को खेल केटा उन्नत र खेल केटा रंग। खेलहरू चालु गर्नु भनेको GBA4iOS ले प्रदान गर्ने सूचीको शीर्षकमा क्लिक गर्न र स्क्रिनमा भर्चुअल बटनहरू प्रयोग गर्न जत्तिकै सरल छ, मानौं हाम्रो हातमा निन्टेन्डो पोर्टेबल कन्सोल छ।
जस्तै प्रसिद्ध शीर्षकहरू खेल्नुहोस् सुपर मारियो Bros वा Zelda यो हाम्रो उपकरणमा पहिले नै सम्भव छ। हामी एक कन्ट्रोलर प्रयोग गर्छौं भने धेरै राम्रो MFiयद्यपि थोरै अभ्यासको साथ, भर्चुअल बटनहरूले पनि काम गर्दछन्।
थप जानकारी - ट्यूटोरियल: PS3 को नियंत्रक र आफ्नो आईफोन वा आईप्याड (जेलब्रेक) सँग खेल्नुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईओएस » iOS7» GBA4iOS, जेलब्रेकको आवश्यकता बिना तपाइँको खेल केटा इमुलेटर
के यो iOS6 को साथ उपयुक्त छ?
मैले यसलाई आईपोज iOS को आईओएस download र आईफोन iOS को आईओएसमा डाउनलोड गरें र यसले "डाउनलोड त्रुटि" दिन्छ।
अब्राहमलाई जवाफ दिनुहोस्
होइन, तपाईंले अघिल्लो संस्करण डाउनलोड गर्नुपर्नेछ जुन तपाईंसँग उही पृष्ठमा छ तर तल।
तपाईं साथीहरूले सफारीबाट अनुप्रयोग स्थापना गर्न कसरी प्रबन्ध गर्नुभयो? अनुप्रयोग भण्डारको माध्यम बिना नै !!
अनोनिमसलाई जवाफ दिनुहोस्
ब्ल्याकस्टार 9496 भन्यो
ट्वीकको नाम के हो जससँग फोल्डरहरू पूर्ण स्क्रीनमा देखिन्छन् (यस लेखको दोस्रो स्क्रिनसट)?
Blackstar9496 लाई जवाफ दिनुहोस्
यो FolderEnhancer हो
मसँग खाली आईकन छ ... र जब म यसलाई चलाउँछु, यो पुनर्स्थापना गर्दछ ...
र यति सबै समयमा।
यो किन हुन सक्छ?
Agus लाई जवाफ दिनुहोस्
त्रुटि जुन यो लगातार स्थापना गरिएको छ तपाईंले ० 19/०02/२०१F भन्दा पहिले मिति राख्नु भएको छ, मात्र यो स्थापित गरिएको छ र पहिलो पटकको लागि खोलिएको छ, सही मिति पुन: सेट गर्न सकिन्छ।
उस्तै चीज मलाई पनि हुन्छ, स्थापना गर्ने बित्तिकै त्रुटि आउँदछ, यसलाई पछि प्रयास गर्नुहोस् ... मलाई लाग्छ यो संतृप्ति हुनेछ अहिले उनीहरूले केहि अपडेट गर्दैछन्।
क्रिस्टियनलाई जवाफ दिनुहोस्
यसले मलाई यो चलाउन दिदैन, यो स्थापना गर्दछ, म यसलाई जारी राख्न दिन्छु तर यसले अनुप्रयोगबाट बाहिर जान्छ र हरेक चोटि जब म अनुप्रयोग प्रविष्ट गर्न चाहान्छु यो द्रुत रूपमा बन्द हुन्छ।
@ dry_059 भन्यो
हेलोले काम गर्दैन, रोम अनुप्रयोग जहिले पनि स्थापना गरिएको हुन्छ !!!
@ Dry_059 लाई जवाफ दिनुहोस्
डिएगो Cedeño (@ LDCedeno) भन्यो
यो सहि स्थापना गर्दैन ... यो बारम्बार स्थापना हुँदै जान्छ।
डिएगो Cedeño (@ LDCedeno) लाई जवाफ दिनुहोस्
ठिक छ, यसले मलाई लक्जरी, अ English्ग्रेजीमा रूमहरू, तर लक्जरीको लागि उपयुक्त छ
Byalexx00 लाई जवाफ दिनुहोस्
आईफोन S एस मा एकदम छिटो स्थापना गर्नुहोस्। र यो धेरै राम्रो काम गर्दछ 🙂
CHRIS लाई जवाफ दिनुहोस्
पाइप रिवेरा डायज भन्यो
अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नुहोस् तर यो आईओएस correctly मा राम्रोसँग स्थापना गर्दैन
पाइप रिवेरा डायजलाई जवाफ दिनुहोस्
जो सहीसँग स्थापित छैन, धैर्यता। यो भर्खरै जारी गरिएको छ र सबैजना डाउनलोड हुँदैछन्।
4s मा काम गर्दैन? सबै समय स्थापना गर्दै समाधान के हो?
Rey लाई जवाफ दिनुहोस्
मेरो आईफोनमा यो विलासी छ तर आईप्याड मिनीमा स्थापनाले मलाई असफल गर्दछ, बारम्बार स्थापना हुन्छ र म यसलाई स्थापना गर्न सक्दिन।
Danibr2 लाई जवाफ दिनुहोस्
हेलो मेरो s एसमा सबै ठीक छ, म पहिलो पटक असफल भयो त्यसपछि मैले यसलाई स्थापना रद्द गरेँ र यो राम्रोसँग स्थापना भयो !!
डिएगोलाई जवाफ दिनुहोस्
के कसैलाई त्यो मार्ग थाहा छ जहाँ रोमहरू मैले पहिले नै गरेको पास गरें, धन्यवाद!
ROM हरू अ in्ग्रेजीमा मात्र हुन्? के तिनीहरू स्पेनिशमा डाउनलोड गर्न सकिदैन?
लुइस्मुरलाई जवाफ दिनुहोस्
राम्रोसँग काम गर्दछ!
यो आईफोन and र आईफोन ss मा पूर्ण रूपमा काम गर्दछ।
मलाई थाहा छ के यदि तपाईं Wii वा PS3 रिमोट कनेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ अघिल्लो Cydia emulators जस्तै। धन्यबाद
CR7 लाई जवाफ दिनुहोस्
जॉर्ज Ignacio भिडेला Véliz भन्यो
यो काम गर्दछ, नराम्रो तर यसले कार्य गर्दछ, खेलहरू चपी र खराब एफपीएसको साथ आईफोन i आईओएस in मा म सिफारिस गर्दछु जेबी इमुलेटर राम्रोसँग काम गर्दछ।
जॉर्ज Ignacio भिडीला Véliz लाई जवाफ दिनुहोस्
धेरै राम्रो योगदान! म तपाइँको दिनहरूमा तब्बू स्थापना गर्दछु, नि: शुल्क AppStore बाट प्रोग्रामहरू स्थापना गर्न, र यो राम्रो काम गर्दछ। के म सोचिरहेछु कि किन तिनीहरू साइडिया उस्तै तरीकाले स्थापना हुने गर्दैन ... .. मलाई थाहा छैन यो हुन सक्दछ भने…।
Casiproencia लाई जवाफ दिनुहोस्
यो प्रमाणपत्रहरूको माध्यमबाट गरिन्छ जुन एप्पलले फिर्ता लिन सक्छ जब यो चाहिन्छ, यदि तिनीहरूले साइडियाको लागि गरे भने प्रमाणपत्र एक दिन रहनेछैन ...
जुआन मानुएल भन्यो
कस्तो राम्रो समाचार, यसले ठूलो काम गर्दछ, मलाई यो मनपर्दछ
जुआन मानुएललाई जवाफ दिनुहोस्
आईफोन On मा यो धेरै राम्रो काम गर्दछ। ड्रपबक्ससँग सि sy्क नगर्ने एक मात्र कुरा, जब ड्रपबक्स अनुप्रयोग खुल्छ यसले मलाई भन्छ। "अनुप्रयोग त्रुटि: प्रयोगकर्ताहरूको सीमित सेटले मात्र टोकनहरू प्राप्त गर्न सक्दछन् जब अनुप्रयोग विकास मोडमा हुन्छन्।" के कोहीले ड्रपबक्सको साथ इमुलेटर समक्रमण गर्न सकेको छ?
नमस्ते जुआन, ड्रपबक्ससँग सि sy्क गर्ने प्रयास गर्दा मलाई पनि त्यस्तै हुन्छ। इमुलेटरले ठूलो काम गर्दछ, तर केहि कारणका लागि समिकरणले काम गर्दैन। कसैलाई किन थाहा छ?
कार्लोस माइक भल्लहरू भन्यो
यो राम्रोसँग काम गर्दछ। निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस् र अनुप्रयोग स्थापना गर्नु अघि मिति परिवर्तन गर्नुहोस्। खेलहरू आईट्यून्सबाट समस्या बिना थप्न सकिन्छ। यो एक उत्तम अनुप्रयोग हो, यो लामो समय सम्म चलेको आशा छ।
कार्लोस माइक भोलहरूलाई जवाफ दिनुहोस्
डोमेल 999 भन्यो
यो अनुप्रयोग हो जुन तपाईंको आईफोनबाट तपाईंको सबै व्यक्तिगत डाटा प्रतिलिपि गर्दछ?
Domel999 लाई जवाफ दिनुहोस्
मलाई स्थापना गर्दैन
यसले भर्खर लोड हुँदै भन्छ ... समाप्त गर्नुहोस् र फेरि लोड हुँदै भन्छ
यो कहिल्यै स्थापित छैन !!
कार्लोसलाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार, ती काम नगर्नेहरूको लागि किनकि यसले फेरि र फेरि स्थापना गर्दछ।
तिनीहरूले फेब्रुअरी १,, २०१ 19 अघि मिति परिवर्तन गर्नुपर्नेछ। र तिनीहरू तुरून्त स्थापना गरे। एकचोटि यो पहिलो पटक खोल्दा, तिनीहरू सामान्य मितिमा फर्कन सक्दछन्।
खेलहरूको लागि तपाईंले पनि त्यस्तै गर्नुपर्दछ।
यस अनुप्रयोग वा अर्कोको अपरेशनको बारेमा कुनै प्रश्न।
म मेरो ट्विटर छोड्छु
एलियालाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार, सुपर मारियो the को ROM खारेज गर्नुहोस्, सबै चीज राम्रोसँग काम गर्दछ, तर यसको कुनै आवाज छैन, कसैलाई किन थाहा छ?
र तपाइँ कसरी मिति परिवर्तन गर्नुहुन्छ?
Marmalade लाई जवाफ दिनुहोस्
एन्जिल बार्ट भन्यो
म संस्करण १.1.6.2.२ डाउनलोड गर्न प्रयास गर्दछ जसले यो आईओएस with को साथ उपयुक्त छ भन्छ, तर यसले मिति फेब्रुअरी १ ​​to मा परिवर्तन गर्दछ, के कसैले मलाई त्यो बुझाउन सक्छ?
एन्जिल बार्टलाई जवाफ दिनुहोस्
कसरी आईफोनको लागि प्रक्षेपण केन्द्र प्रोको साथ उन्नत कार्यहरू सिर्जना गर्ने
आईब्यान्ड: एप्पलको "स्वास्थ्य" वाचको बारेमा नयाँ अवधारणा